Bato Idzva reZimbabwe People First Roshoropodza Mhirizhonga
Bato idzva rinopikisa reZimbabwe People First rinoti rinoshoropodza zvikuru mhirizhonga yakaitika kunhengo dzaro mukupera kwesvondo mumusha weGlen View.
Machechi Makuru Oronga Kutaura naVaMugabe neVanopikisa Achiti Nyika Yaenda kuMawere
Munyori mukuru we Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Father Fredrick Chiromba, vanoti munguva pfupi inotevera vanofunga kuti vanenge vakwanisa kuita misangano nevezvematongerwo enyika.
Vamwe Voshora Kusapinda kweZanu PF Muhurongwa hweKurangarira VaItai Dzamara
Nyanzvi inoongorora zviri kuitika munyika yakazvimirira, Va Tendai Ruben Mbofana, vanoti mhunhu wese wemu Zimbabwe anofanirwa kurangarira VaDzamara, sezvo vari chizvarwa chenyika.
Huori neChioko Muhomwe Zvonyanya Muzvipatara kuBuhera West?
Vagari vekuBuhera West vanoti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa kuzvipatara uko vanonzi vatenge mishonga yekurapa iyo inosungirwa kunge ichipihwa pachena kuvazhinji vanoshaya.
VaDzamara Vanorangarirwa Zvine Mutsindo muHarare
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vabatana neChitatu nemhuri yemurwiri wekodzero dzevanhu, VaItai Dzamara, mukucherechedza kusvitsa gore VaDzamara vapambwa ndokutsakatika.
VaTogarepi Vanoti Vanobviswa Matomu naVaMugabe Chete muZanu PF
Mukuru wevechidiki muZanu PF, VaPepurai Togarepi, vanoti vechidiki havana masimba ekuvamisa basa, sezvo vasina kuvhoterwa kuva mukuru weboka iri.
Vanhukadzi Vokurudzira Hurumende Kuti Ivabatsire Kurapa Gomarara
Mukuru wesangano reStudents Females Network, Muzvare Evernice Munando, vanoti vari kukurudzira hurumende kuti ikwanise kuwanisa vanhukadzi mukana wekuchengetedza hutano hwavo kuitira kuti zuva remadzimai iri rive nezvarinoreva zvakakosha kwavari.
Zanu PF Inokunda Freedom Pary kuMhondoro-Mubayira
Mumiririri weZEC musarudzo iyi, VaGodfrey Maisiri, vanoti VaGangarahwe vakakunda VaRodwell Nyanganya avo vaimiririra bato reFreedom Front.